Sheekooyin Archives | Kaasho Maanka
#2 Sideen ku gaaloobay?
W/Q: Mr. Dhaashane
Qaybta: Diinta Islaamka, Sheeko Faneed
2007 waxa uu ii ahaa sannadkii isbadalka. Waxaan u soo tillaabay tacliintaydii sare. Inkastoo aan hakad galiyay markii aan dugsiga dhexe ka soo aflaxay oo aan dhanka barashada diinta u soo jihaystay, se waqtigu waxa uu mar kale jaanis ii siiyay inaan dib ugu laabto waxbarashadaydii maadiga ahayd. Waxaa dhammaan is badalay xaaladahaygii nololeed oo ay ugu horreyso qaab noolaanshahaygii ahaa...
#1 Sideen ku gaaloobay?
Waxaa la sheega in oday kamid ah Soomaalida geelleyda ah wiil uu dhalay uu jirro ama xanuun ugu dhintay deegaan aan kiisii ahayn. Odaygii geel jiraha ahaa warkii baa soo gaadhey, warankiisuna hore qaatay isagoo go’aansaday inuu u aaro wiilkiisa. Markuu soo gaadhey goobtii wiilkiisu Ku dhintay, dadkii waxay Ku boobeen tacsi dhegihiisa waxaa ka batay ereyga “Illaahay ha u...
#20 TUKASHO IYO TUMASHO
Shiikh Kabriid waxa uu aroortii arbacada shaqada u toosay isaga oo qaaddiro iyo daal bestiis la ahaa, waayo waxa uu gurigii Dhudi Gaatame ka soo guureeyey xilli danbe, ka dibna hurdo ayuu iska waayey. Maalintii arbacada waxa uu shaqeeyey isaga oo aan ka la garaneyn madaxa iyo majaha mid uu ku soconayey. Maalintaas keli ah baa ka xumaatay, ee khamiis iyo jumce waxa uu u shaqeeyey si firfircooni...
#19 TUKASHO IYO TUMASHO
Shiikh Kabriid axaddii oo dhan waa uu hurdey, isniintii iyo talaadadiina sidii caadiga ahayd buu shaqadiisii u kallahay. Isaga oo talaadadii shaqada joogey baa la soo wacay, mana uu sii eegin magaca soo garaacay ee waa uu ka jawaabey. Qofka soo wacay waxaa la moodey in uu isku soo aaddiyey xilli yaraa ee shaqada loo nasanayey. Sidii qof u jeedey in uu shiikhu biririf galay buu wacitaanka nasasho...
#18 TUKASHO IYO TUMASHO
Shiikh Kabriid waxa uu internetka ama falkiska ka baarbaaray heeso soomaali ah. Intii uu heesaha baarbaarayey buu daasaddii biirka oo koobaddiinka saarnayd kor u qaaday, waxa uuna arkay in ay marnayd. Kumbuyuutarkii buu waxa uu dhigay sariirta dusheeda, ka dibna waxa uu u kacay xagga jikada isaga oo daasaddii marnayd midigta ku sitey. Khaanad ay baco badani ku jireen buu bac ka soo saaray, waxa...
#17 TUKASHO IYO TUMASHO
Kowdii habeennimo ayaa waxaa soo dhacay guurguurehii shiikh Kabriid. Waa uu sii gam’ayey markii uu koobaddiinka dushiisa ka gariirey oo uu ka sharqamay guurguure gal madoobi. Shaashadda ama muraayadda waxaa ku qornaa ”Seeraar Duubigeel”, waxa uuna Kabriid qabtay markii uu labo jeer dhacay, oo waxa uu yiri